अनि ती किशोरीलाई लाइभ च्याटले पोर्न साइटसम्म पुर्‍यायाे.. लकडाउन खुल्यो । उनीहरू भेट भए । किशोरी छाँगाबाट खसिन् । ती व्यक्ति ४० वर्षवरपरका थिए । धेरै कुरा नगरी किशोरी घर फर्किइन् । एक साइटमा ब्लक गर्थिन् । अर्कोमा उनी कडारूपमा प्रस्तुत हुन्थे २४ वैशाख, २०७८ 14 min read Share
संसारका श्रमिक एक होऔं भन्ने पार्टीको सरकार छ, मजदुर सडकमा रुँदैछन् पढाएको अन्तिममा एक वाक्य बोल्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको शैली नै बनेछ, ‘हामी कसैका पुजारी र अनावश्यक आलोचक होइनौँ ! हामी त एकअर्कोलाई सम्मान र आदर गर्ने संस्कारी हौँ, नपत्याए मलाई नै हेर्नुहोस्’ १८ वैशाख, २०७८ 21 min read Share
खराब छैनौँसमेत भन्न किन सक्नुहुन्न तपाईं पुरुषहरू ? जबसम्म छोरीलाई छोरासरह हुर्कने, घुमफिर गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यस्ता घटना रोकिँदैनन् । छोरालाई शक्तिशाली, बलशालीका रुपमा हुर्काउने घरपरिवार र समाजले तिमी अपराधी बन्न हुन्न भनेर कहिल्यै सिकाएको छ ? २९ चैत, २०७७ 15 min read Share
‘जीवित मान्छेले मेरी छोरी हो भन्दा पनि नचिन्ने सरकारले एक निर्जीव कागजलाई किन विश्वास गर्छ ?’ किशोरीमा लगानी गर्ने, छोरीमाथिको विभेद हटाउन नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने हो भने जन्मदर्ताको समस्या समाधानउन्मुख हुन्छ ८ चैत, २०७७ 15 min read Share
राष्ट्रपतिलाई प्रश्न- अब अर्की छोरी राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने चाहेको हो ? कोमल वलीको चरित्रमाथि मात्र होइन, राजनीतिमा भविष्य देखेका महिलाको अस्मितामाथि धावा बोल्ने रघुजी पन्तको भाषण किन कारबाहीको दायरामा आउन सकेन ? अहिले पनि किन अधिकांश मानिसहरू रघुजी पन्तको भाषण ठीक हो भनिरहेका छन् । यो विषयले हजुरको मन दुखेको छैन ? २३ फागुन, २०७७ 16 min read Share
पशुपतिनाथमा उठेकाे भेटी सामाजिक सेवामा किन प्रयाेग नगर्ने ? ब्रह्मपुरमा नाङ्गै हिँडेका महादेवलाई देखेर सय ऋृषिपत्नीहरू महादेवको पछि लाग्छन् । ध्यानमा ब्यस्त भएका श्रीमान्‌ले यौन सन्तुष्टि दिन सकेनन्, महादेवको पछि लागौँ भनेर स्वस्थानीमा लेखिएको कुरा छाडा लाग्दैन ? १३ फागुन, २०७७ 17 min read Share
शिवलिङ्ग पुज्नेहरूलाई भजइना ‘छाडा’ लाग्यो ? मन्दिरमा बनाइएका मूर्ति, पोस्टर जहाँ देवी अर्धनग्न भए पनि उनीहरूलाई अश्लील लाग्दैन तर एक महिलाले मौसमअनुकूल आफ्नो शरीरलाई सुहाउने सजिलो पोशाक लगाउँदा अश्लील लाग्छ । ९ फागुन, २०७७ 14 min read Share
स्वस्थानी व्रतकथाले भन्छ, ‘छोरी सन्तान होइनन्’ कसैले आफ्नो सात वर्षकी छोरीलाई सत्तरी वर्षको पुरुषसँग विवाह गराइदिन सक्छ ? यसलाई भगवान्‌को देन भन्ने हिम्मत कसैसँग छ ? बीस वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय भनेको छ हाम्रो कानुनले । अनि यही कुरालाई आदर्श मानी हामी व्रत बस्ने अनि घरघरमा स्वस्थानी पढ्ने ? १४ माघ, २०७७ 16 min read Share
किशोरीले भनिन्, ‘जब मैले घामलाई जून देखेँ’ सामाजिक सञ्जालमा एकछिन गर्ने मायाप्रेमका कुरा, सहयोगी भएको नाटक, क्षणभरमा लाग्ने राम्रोजस्ता कारण बालबालिकाले भागेर विवाह गर्ने चलन बढिरहेको हो । यो रोकथाम गर्न बाल क्लब, किशोर/किशोरीहरू सचेत हुनुपर्छ । रेजिना, रञ्जुजस्ता किशोरी मात्र होइन, ममता झाजस्ता अभियन्ताको सिको गरी बालविवाह रोकथाम गर्न ढिला भइसकेको छ ४ माघ, २०७७ 14 min read Share
‘कण्डम खुलेआम बेच्ने मेडिकलहरू स्यानिटरी प्याड चैँ किन पाेकाे पार्छन् ?' ‘पत्रिकाले बेरेर बेच्नेहरूले पनि मुसुक्क हाँसेर प्याड दिनुहुन्छ, दाइहरू पनि किन्न जान हुन्छ, लुकाएर हिँड्नु पर्दैन’, उनले भनिन्, ‘प्याड लाजको विषय होइन, लाज त त्यो हो, जसले मिन्स एक सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने पनि बुझ्दैन’ १९ पुस, २०७७ 13 min read Share
छाेरीले साेधिन्, 'बाबा किन म्यासेज डिलिट गरेकाे ?' कतिको त म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप सबैमा छुट्टाछुट्टै लक गरिएको हुन्छ । किन होला ? यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पाटो होलान् । तर, महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यहाँ हुने संवाद र हेरिने सामग्रीहरू नै हुन् । जसले विश्वास र सम्बन्धमा दरार मात्र ल्याउँदैन, कानुनी रूपमा दण्ड सजायको भागिदारसमेत बनाउँछ ३ पुस, २०७७ 12 min read Share
के तपाईं आफ्नो नाङ्गो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ ? त्यही बेला म्यासेन्जरमा टिरिङ टिरिङ आवाज आएपछि उनको मोबाइल हेर्दा सबै अचम्ममा परे । किशोरी त्यसरी ट्वाइलेटमा लामो समय बस्ने कब्जियत र पायल्सको कारण होइन म्यासेन्जरमा गर्ने संवादको कारण रहेछ । उनले पठाएका फोटो, आएका फोटोहरु त अभिभावकले देखे र डिलिट गरे । तर भिडियो कल कसरी भएको थियो त्यो थाहा भएन १४ मंसिर, २०७७ 12 min read Share
के महिला पुरुषको प्रगतिको जगेडा हुन् ? यसरी हरेक कार्टुनमा पुरुष पात्र बलियो छ, महिला कमजोर छ भन्ने देखेको बालकमा आउने सोच समानताको होला ? अवश्य छैन । सुन्दर परिवार देखाइएको कथामा पनि महिलालाई घरको काममा सीमित गरिएका दुश्यहरु छन् । पुरुषको सहारा विना महिलाले केही गर्न सक्दिनन् भन्ने देखाइएको छ । २७ कात्तिक, २०७७ Share
देवी पुज्नेहरु नै किन छोरीमाथि विभेद गर्छन् ? हिन्दु धर्मको मुल ग्रन्थ वेदका अनुसार प्रकृति र पुरुष दुई प्राणी हुन । वेद र उपनिदषहरुका अनुसार प्रकृति महिला हुन् । त्यही भएर जीवन चल्न प्रकृति र पुरुष एक साथ हुनपर्छ भनिएको हो । प्रकृति बिनाको पुरुषको कल्पना गरिएको छैन । अर्थात महिला बिना पुरुषको जीवन सम्भव छैन । ८ कात्तिक, २०७७ Share
पशुमाथि करणी हुन्छ, मानवमाथि हुन्न ! मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा मानवलाई पशुसमान पनि मानिएको छैन । महिला र पुरुष दुवै मानव हुन् । अर्थात् बालिका र बालक दुवै मानव हुन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२७ को उपदफा २ मा गाई करणी गरे वा गराएमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय र २० हजार जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर, यही कानुनले बालकमाथि करणी हुने कुरा स्वीकार गर्दैन २ कात्तिक, २०७७ Share
विज्ञापन, मनोविज्ञान र गुणस्तर बालमनोविज्ञान र खाने कुराको गुणस्तर मापन गर्न नेपाल सरकारसँग कानुनी आधार नभएको होइन । नियमन गर्ने निकाय नभएको पनि होइन, केवल एकले अर्को पक्षलाई देखाएर पन्छिने परिपाटीका कारण यस्ता विज्ञापन नियमित प्रसारण भइरहेका छन् ११ असोज, २०७७ Share
के सरकारले नै बालबालिका बेच्न मिल्छ ? विभिन्न संस्थाहरूले राखेको अभिलेख हेर्ने हो भने कानुनी बाटोबाट ३ हजार १ सय २१ बालबालिका गएको देखिन्छ, तर यो एकतिहाइ पनि होइन २९ भदौ, २०७७ Share
बालकमाथि पनि हुन्छ ‘बलात्कार’ गैरसरकारी संस्था खोली सामाजिक सेवा, पर्यटन, व्यापारलगायतका नाममा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने नेपाली नागरिकहरूले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ३ भदौ, २०७७ Share